चीनबाट उद्धार गरिएका नेपालीहरुलाई विद्युत प्राधिकरणको तालिम केन्द्रमा राखिने ! | Samabesi Khabar
चीनबाट उद्धार गरिएका नेपालीहरुलाई विद्युत प्राधिकरणको तालिम केन्द्रमा राखिने !
सरकारले चीनबाट फर्काइने नेपालीलाई भक्तपुरको खरिपाटीस्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तालिम केन्द्रमा राख्‍ने तयारी गरेको छ ।
मंगलबार साँझ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले चीनबाट ल्याइने नेपाली नागरिकलाई भक्तपुरस्थित विद्युत प्राधिकरणको तालिम केन्द्रमा राख्ने तयारी गरेको स्रोतले बताएका छ ।
स्रोतका अनुसार तालिम केन्द्रको पूर्वाधार र अन्य वस्तुस्थितिबारे निरीक्षण गरेर मात्र त्यहाँ राख्ने विषयमा अन्तिम टुंगो लगाइने छ । तालिम केन्द्रको स्थितिबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीले निरीक्षण गर्नेछन् ।
बैठकमा मुख्यसचिव रेग्मी, प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा, प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाललगायत सहभागी भएका थिए ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएपछि चीनको वुहानमा रहेका नेपालीहरुलाई स्वदेश फर्काइने सरकारले तयारी गरे पनि राख्ने ठाउँको टुंगो लगाउन सकेको थिएन ।
सरकारले चीनबाट फर्काइएका नेपालीलाई राख्ने ठाउँको टुंगो लाग्ने वित्तिकै उनीहरुलाई स्वदेश फर्काइने यसअघि नै जानकारी दिइसकेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार सरकारले नेपाली नागरिकालाई चीनबाट स्वदेश फर्काउनका लागि दुई वटा जहाज पनि तयारी अवस्थामा राखेको छ ।
उनका अनुसार चीनबाट नेपाल फर्किनका लागि १ सय ८० जनाले फारम समेत भरिसकेका छन् । चीनबाट नेपाल ल्याइएपछि उनीहरुलाई विमानस्थलमा स्वास्थ्य परीक्षण गरिनेछ । उनीहरुलाई १४ दिन क्वारेन्टाइनमा राखिनेछ।
हालसम्म कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ४ सय २६ पुगेको छ । मंगलबार हङकङमा पनि एक जना बिरामीको मृत्यु भएपछि चीनबाहिर मृत्यु हुनेको संख्या २ पुगेको छ । यस अघि फिलिपिन्समा पनि एक जनाको मृत्यु भएको थियो।